मेरी आमा « Rara Pati
यस्तै पानी पर्दा मेरी आमा निर्थुक्क भिजेको धोतीले मुख पुछ्दै घरभित्र छिर्नु हुन्थ्यो, अनि हतारिँदै सोध्नुहुन्थ्यो, ‘तिमीहरूलाई भोक लागिरहेको होला, नआत्तियो, म रोटी बनाउँछु, जे छ घरमा त्यहि छिटो छिटो बनाएर खुवाउँछ ।’ आज पानी निरन्तर परेको ४–५ दिन भइसक्यो, मेरी आमाको धोती आजसम्म सुक्न पाएको छैन होला । आमाले हाम्रा लागि खाना बनाउने निहुँमा अँगेनामा आफ्नो धोती सुकेको पत्ता पाउनु हुदैनथ्यो । आज त्यो धोती सुक्नलाई आमाले अँगेनोमा आगो बाल्न सक्नु भएको छैन किनकी छोराछोरी उहाँका साथमा छैनौं । अनि कहाँबाट दिउँसोमा आँगो बल्छ । मेरी आमाको भान्सामा धोती पनि सुकेको छैन होला कति दिनदेखी मेरी आमाको !
अनौपचारिक रूपमा हात्ती सुँढे वा आरी घोप्ट र धुम (स्याकु) वा छाता छेड्ने पानी भन्थ्यौं । एक्कासी मेरी आमाको यादहरूलाई बोकेर ल्यायो । सायद मेरी आमालाई आज भोक लाग्यो कि ! कोरोनाले थलिएकी मेरी आमा जस्तै हजारौं आमाहरूको कसैले धोइ दिएको धोती फेरी यो मुसलधारे पानीले भिज्यो कि ! सायद आमालाई आज धेरै छोराछोरीको याद आएर रुनु भयो कि ! त्यसैले मुसलधारे पानी परिरहेको हो कि ?
अचेल नेपालमा भारी वर्षा भएको छ वा हुने क्रममा छ । पहिले बाक्लो झरी, अविरल वर्षा, भिषण वर्षा, मुसलधारे वर्षा, हावाहुरी सहित, असिना सिमसिमे पानी वा फाट्टफुट्ट पानी पर्ने र समयमा नै रोकिन्थ्यो । अनौपचारिक रूपमा हात्ती सुँढे वा आरी घोप्ट र धुम (स्याकु) वा छाता छेड्ने पानी भन्थ्यौं । तर खै आजकलको यो भारी वर्षा कहाँबाट कसरी आयो, आयो । एक्कासी मेरी आमाको यादहरूलाई बोकेर ल्यायो । सायद मेरी आमालाई आज भोक लाग्यो कि ! कोरोनाले थलिएकी मेरी आमा जस्तै हजारौं आमाहरूको कसैले धोइ दिएको धोती फेरी यो मुसलधारे पानीले भिज्यो कि ! सायद आमालाई आज धेरै छोराछोरीको याद आएर रुनु भयो कि ! त्यसैले मुसलधारे पानी परिरहेको हो कि ?
आमा, आज तिमी बढेस कालमा थलिँदा पानी तताएर दिने साथमा छोराछोरी नहुँदा नि तिम्रो आफ्नो बच्चाप्रति केहि गुनासो छैन । पिँडा नदेखाई हाँसीहाँसी बोलिदिन्छ्यौं अनि भित्र अँध्यारो कोठामा गएर रुन्छ्यौं बुढी माऊ ।
आमालाई नेभेटेको पनि वर्षौं भएछ, मेरी आमाको अनुहारको चमक कस्तो भएको होला ? कपाल फुलेर सेताम्ये भएको होला । तिम्रो लाउने चोलो र धोतीमा मयल जम्मा भएको होला । कमजोर भयौं होला आमा केहि परिस्थितिले त केहि छोराछोरीको पिँडाले । तिम्रा निधारमा धेरै मुजा परेको छ रे भन्ने पनि सुनेको छु । आमा पल्ला घरको कान्छीले भन्दै थिइ, ‘तिमी फोन चलाउन जान्दिनौं । कति आत्तिन्छौं होला छोराछोरी सम्झेर ? कति तड्पिन्छौं होला आमा ? आफ्ना छोराछोरी आफूबाट एकपल टाढा हुँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आज म आमा भएपछि अुनभव गर्दैछु आमा । सन्तानको खुशीको लागि आफ्नो जीवनलाई तिलाञ्जली दिने सम्पूर्ण आमाहरूलाई मेरो नमन । भला आमा नपेढेकी नजानेकी होलिन तर तिमीलाई आज यो स्थितीमा र स्थानमा पुर्याउने तिम्रो आमा नै हो मनको कुरा बुझ्ने हामीलाई दुःख पर्दा आफ्नो दुःख सम्झीँ रातदिन खटियौं । आमा, आज तिमी बढेस कालमा थलिँदा पानी तताएर दिने साथमा छोराछोरी नहुँदा नि तिम्रो आफ्नो बच्चाप्रति केहि गुनासो छैन । पिँडा नदेखाई हाँसीहाँसी बोलिदिन्छ्यौं अनि भित्र अँध्यारो कोठामा गएर रुन्छ्यौं बुढी माऊ ।
धेरै माया आमा !
लेखक भण्डारी जनप्रशासन कलेजमा प्राध्यापन पेशामा सङ्लग्न छन् ।
रिता भण्डारीको पहिलो गीत ‘तिम्रो काखमा’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
१ असोज, काठमाडौं । रिता भण्डारीको पहिलो गीत ‘तिम्रो काखमा’ सार्वजनिक भएको छ । मिडिया
हाटसँगै मध्यपहाडमा घटेको आत्मनिर्भरता
तिब्बती सिमानाका हुम्ला र मुगुका भोटेहरू समेत त्यो बेला नुनको व्यापार गर्दथे । वि.सं. २०११
१४ भदौ, काठमाडौं । आज कृष्णजन्माअष्टमी अर्थात सुदूरपश्चिमेलीहरुको महान चाड गौरा पर्वको अन्तिम दिन ।
कहिले पनि पछाडि फर्किने नसोचकिनकी अण्डा फुटाएर बाहिर निस्केको चरा हौं तिमीआफ्ना पखेटामा तागत भरउड्ने
राराफुटी राक्म डोल्ने ज्योतीष गीतानन्दको भविष्यवाणी
राजा तीलसी बम्मसँगै दुल्लुबाट आठविस आएका गर्ग गोत्रिय आचार्य ब्राम्हणहरूलाई लामिछानीको पाखा जग्गामा बसाइएको थियो